कार्लमाक्र्सको जीवनीबारेको चलचित्र चीनमा प्रदर्शन
कार्लमाक्र्सको जीवनी समेटिएको चलचित्र द योङ कार्ल माक्र्स चीनमा शनिबारदेखि प्रदर्शन सुरु गरिएको छ । उक्त चलचित्रमा कार्ल माक्र्स र एंगेल्सको बाल्यकाल समेटिएको छ । उक्त चलचित्र शनिबारदेखि चीनका विभिन्न चलचित्र हलमा प्रदर्शन थालिने भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
कार्ल माक्र्सको २०० वर्षको जन्म शताब्दीको अवसरमा उक्त चलचित्र प्रदर्शन थालिएको बताइएको छ । उक्त चलचित्रमा माक्र्स र एंगेल्सको बाल्यकाल, उनले एक आपसमा मिलेर कसरी काम गरे भन्ने बारेमा जानकारी समेटिएको छ ।
उनीहरु पहिलोपटक सन् १८४४ मा पेरिसमा भेटेपछि श्रमिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र निर्माणका काममा उनीहरुले के कसरी मिलेर काम गरेका थिए भन्ने विषयमा त्यस चलचित्रमा समेटिएको छ ।
माक्र्सको व्यक्तिगत जीवन, उनको पारिवारिक सम्बन्ध, श्रीमती जेनीसँगको सम्बन्ध र कम्युनिस्ट घोषणापत्र निर्माणका क्रममा सरकारसँगको संघर्ष तथा भोग्नुपरेको अवस्थाका बारेमा उक्त चलचित्रमा समेटिएको छ ।
अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रान्स र जर्मनीका कार्ल माक्र्सका सहयोगीहरुले निर्माण गरेको चलचित्र हाइटियन चलचित्र निर्माता कम्पनी राउल पेकले निर्देशन गरेका थिए । सो चलचित्रमा जर्मन कलाकार अगस्ट डियाअलले कार्ल माक्र्सको भूमिका खेलेका छन् भने अरू कलाकार पनि जर्मनीकै रहेका छन् ।
अमेरिकासँग चीनको व्यापार घट्यो
महिलाको कुमारित्वमा प्रश्न
एंग्री यंगमेनले सोधे-कस्तो छ काठमाडौं ?
गहिरिँदो भेनेजुएला संकट
चीन दुःखसुखको साथी : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
जब आफ्नो साइकलले किचेको चल्ला र पैसा बोकेर अस्पताल पुगे एक बालक …
राजमार्ग अतिक्रमण गरेर बनाएका घरटहरा भत्काउँदा प्रहरी–स्थानीयबीच झडप
युद्धको तयारीमा चीन
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उच्च गिरावट
इचंगुका किसानलार्इ फूल टिप्ने चटारो (फाेटाेफिचर)
दर्जिलिङ ताक्दै लभ स्टेसन
नेपालको मेडिकल डिग्रीलाई मान्यता दिन भारत सकारात्मक
नातेदार नेताको कस्तो छ सम्बन्ध ?
विकासमा खुलेको चीन